समकालिन समस्याको समाधान नखोजिए मुलुक संकटमा फस्छ : डा. भट्टराई
सत्ता वर्चश्व जमाउन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको आरोप
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समकालिन समस्याहरुको उचित समाधान नखोजिए मुलुक संकटमा फस्ने बताउनु भएको छ । कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शााखाले मंगलबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आन्तरीक र बाह्य शक्तिका कारण निम्तिएको राजनीतिक तथा समाजिक समस्या समाधानको दिगो ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।
संयोजक भट्टराईले ठूला राजनीतिक दलहरु चीन र भारत जस्ता बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित भएकाले मुलुक समस्यामा फस्दै गएको आरोप लगाउनु भयो । मुलुक जटिल अबस्था तर्फ गईरहेकाले समकालिन समस्याहरुको समाधानका बिशेष ध्यान दिएर सबै दल र नागरीक समाजसंगको छलफलबाट दीगो समाधान खोज्नु पर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो । पूराना राजनीतिक शक्तिहरु सत्ताको भागबण्डामा केन्द्रीत रहेका र उनीहरुलाई दायीत्वबोध नहुँदा मुलुकको उचित र दीगो विकास हुन नसकेको भट्टराईको भनाई थियो ।
स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताका बिषयमा कुनै पनि राष्ट्रसंगको सम्झौता कसैलाई स्वीकार्य नहुने भएकाले राष्ट्रियताका सवालमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । मुलुक संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा केन्द्र हुँदै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने भएपनि संघियताको मर्म विपरित सरकारले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको भट्टराईले टिप्पणी गर्नुभयो ।
सत्ता र समाजमा वर्चश्व जमाई राख्न केहि राजनीतिक शक्तिहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । समाज र राष्ट्रको विकासका लागि औद्योगिक क्रान्ति आबश्यक भएकोले अबको शक्ती औद्योगिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनु पर्ने संयोजक भट्टराईको धारणा थियो ।